Wararka Maanta: Isniin, Aug 20, 2018-Madaxweyne Farmaajo oo shacabka u diray hambalyo ku aaddan munaasabadda Ciidda Carafo
Isniin, August, 20, 2018 (HOL) - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadda barakaysan ee Ciidul Adxaa.
“Maalmahan barakaysani waa ayaamo ku weyn diinteenna iyo dhaqankeenna, waa maalmo ku suntan isjacayl, wadajir iyo is-taakulayn, taasi oo muujinaysa dareenka walaal-tinnimo ee ka dhexeeya dadkeenna.” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynuhu waxaa uu sidoo kale ku guubaabiyey shacabka in ay ka shaqeeyaan xoojinta nabadda iyo xasiloonida dalka.
“Dhammaan Muslimiinta gudatey waajibaadka Xajka sannadkan waxaan Alle uga baryayaa in uu ka aqbalo acmaashooda wanaagsan. Xajku waa tiir weyn oo kamid ah tiirarka ay ku taagan tahay diinteennu, dawladda Soomaaliyeedna waxaa ka go’an inay u fududeyso muwaadiniinteeda gudashada waajibaadka Xajka.”
Maalinta Berri ahaa ayeey guud ahaanba muslimiinta dunida u dabaal- degayaan munaasabada Ciida Carafo oo ah mid ka mid ah ciidaha ugu ballaaran dunida muslimka.